महिला भएकै कारण सहनुपर्ने ?
महिलाले महिला भएकै कारण सहनुपर्ने ? पीडा खेप्नुपर्ने ? समानतायुक्त लोकतान्त्रिक शासनमा महिलामाथिको ज्यादति कहिलेसम्म ? अन्त्य कहिले ?
अपराधिक मानसिकता बोकेका ब्यक्तिहरुबाट कहिले बलात्कार, कहिले एसिड प्रयोगमा महिलाले महिला भएकै कारण पीडा खेप्नुपरेको छ । केही बर्ष यता आक्रमणको सजिलो हतियारको रुपमा आक्रमणकारीले एसिड्लाई प्रयोग गर्दै आइरहेको कुरा विभिन्न समाचार माध्यमहरुबाट सुनिएको छ । यस आक्रमणको सिकारमा महिला पुरुष दुबै परेका छन् । तुलनात्मक दृष्टिमा पुरुष भन्दा बढी महिला सिकार भएका छन् ।
कहिले बारा पर्सातिर त कहिले राजधानीमा । राजधानीमा पटक पटक एसिड आक्रमणबाट युवतीहरु सिकार भएका छन् । यो अति हो । राजधानीमा महिलाहरु सुरक्षित छैनन् भने देशका दूरदराजका महिलाहरुमाथि कुन तहसम्मको भययुक्त वातावरण होला ?
पुरुषहरुको यौनइच्छाका माँग स्वीकार नगर्दा नै युवतीहरुमाथि एसिड आक्रमण भएका छन् । पुरुषले मन पराउँदैमा, पुरुषले भन्दैमा महिलाले जोरजबरजस्तीका तिनका इच्छाहरु पूर्ति गरिदिनुपर्ने आजका महिलाहरु दास हुन् ?
कानुनले समानताको अधिकार दिएको छ भने महिलाले त्यो समानताको अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । महिलामाथिको अत्याचार र हिंसा रोकिनैपर्छ । कानुन भएरमात्र हुन्न, कानुन व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । अव अति भयो, महिलाहरुले आत्मस्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न पाउनैपर्छ, अन्यथा लोकतन्त्र कसरी सम्भव छ ?
एसिड आक्रमणको शिकारमा परेका महिलाहरुले ज्यान गुमाएका छन्, सुन्दरता गुमाएका छन् । र, ठूलो कष्ठ भोग्नुपरेको छ । कति महिलाले शारीरिक रुपमा अङ्ग भङ्ग भएर जिन्दगी बिताउनु परेको छ । त्यस्ता कसुर गर्ने गराउनेहरुको लागि राज्यले कानुन त बनाएको छ तर कानुनको अवज्ञा गर्दै घटना शृङ्खलाबध्द घटिरहेको छन् । यसको मुख्य कारण बजारमा एसिड सहज रुपमा किन्न पाइने र बिक्रीवितरण ब्यबस्थित नभएर हुन सक्छ । यसमा अपराधीलाई कानुनले दिने सजाय कसुरको प्रकृति हेरेर कुरुप पारेमा ५ पाँच वर्ष देखि ८ वर्ष कैद र एक लाख देखि ५ लाख सम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा ३ वर्ष देखि ५ वर्ष सम्म कैद र पचास हजार देखि ३ लाख जरिवानाको ब्यबस्था गरिएको छ । यति कडा कानुनी कारवाहीको व्यवस्था हुँदा पनि अपराध घटनुको सट्टा बढेको देखिन्छ । किन ? नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार बिगत ७ बर्षमा १८ जना महिला र ४ जना पुरुष माथि आक्रमण भएको छ । यो आक्रमणको सिलसिला रोकिएको छैन ।
अचम्मको कुरा न प्रहरी प्रशासन यस्ता एसिड आक्रमणकारीलाई रोक्न सकेको देखिन्छ, न कानुनले ज्यानै जोखिममा पारिदिने हिंसात्मक प्रवृत्ति भएकालाई कडा कारवाही गर्न सक्षम भएको छ । आखिर किन यस्ता एसिड आक्रमणकारी बचिरहेका छन् ?
जसरी मानव बेचबिखनकारीलाई राजनीतिक संरक्षणमा बचाउने प्रचलन छ, अनेकखालका महिला हिंसामा लेनदेनमा मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति बढेको छ, यसबाट कानुन कमजोर हुनगएको छ । एसिड आक्रमण गर्नेजस्ता अपराधीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न कानुन सफल भएको भए पटक पटक यसता घटना घट्ने थिएनन् । बल्ल आएर सरकारले एसिड आयातकर्ताको लगत राख्न थालेको छ ।
खुला सिमाना भएका कारण लगतले केही हुन्न । हुनुपर्ने कडा कारवाही नै हो । महिलामाथिको हिंसामा कडा कारवाही हुने हो भनेमात्र महिलाले अन्याय सहनुपर्ने छैन ।